hepatitis C – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (ကန်တော့ပါ) ၁။ မင်္ဂလာပါ။ ယောက်ျားလေးပါ။ အသက် ၄၈နှစ်၊ အိမ်ထောင်ရှိ။ စီပိုးသေဆေးသောက်ပြီး ပျောက်ကင်းပြီးသားပါ။ အိမ်ထောင်ဖက်မှာ စီပိုးရှိနေပြီး အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံရင် ကျွန်တော့်ကို စီပိုးပြန်လည်ကူးစက်နိုင်ပါသလားခင်ဗျား။ ၂။ ကျွန်မယောက္ခမပါ။အသက်က ၅၂ နှစ် ရှိပါပြီ။ AIDS...
အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးအကြောင်း လူအများသိလိုသည့် မေးခွန်းများ (၄)
ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ပြုံးကြည် ဥက္ကဌ၊ အသည်းဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ။ ဘီပိုး၊ စီပိုးဆေးကုနေတုန်း မုန်လာနီဖျော်ရည်၊ ကညွတ်ဖျော်ရည် စတာတွေသောက်ရင် ဆေးအာ နိသင်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။ ဖြေ။ ။ ဘီပိုး၊ စီပိုးဆေးကုနေတုန်း မုန်လာဥနီဖျော်ရည်၊ ကညွတ်ဖျော်ရည်စတဲ့ သဘာဝသစ်သီးဖျော်ရည် တွေသောက်ရင်...
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးအကြောင်း လူအများသိလိုသည့် မေးခွန်းများ (၂)
ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ပြုံးကြည် (ဥက္ကဌ၊ အသည်းဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. စီပိုးရှိပြီး ဆေးမကုနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ အသည်းခြောက်တာ၊ အသည်းကင်ဆာမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်နေထိုင်သင့်ပါသလဲ။ ဖြေ. စီပိုးကရှိတယ်၊ ဆေးမကုနိုင်သေးဘူးဆိုရင် အသည်းနဲ့မတည့်တာတွေ လုံးဝရှောင်ရပါမယ်။ စီပိုးရှိရင် အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း စတာတွေကို ရှောင်ရပါမယ်။ ဆိုးဆေးပါတဲ့...
အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးအကြောင်း လူအများသိလိုသည့် မေးခွန်းများ (၁)
ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ပြုံးကြည် ၊ အသည်းဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌ နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး.ဘီပိုး၊ စီပိုးရှိသူနဲ့ တစ်အိမ်တည်း အတူနေရုံနဲ့ ပိုးကူးနိုင်ပါသလားရှင့်။ ပိုးမကူးအောင် ဘယ်လို ကာကွယ်နေထိုင်ရမလဲ။ ဖြေ.ဘီပိုးနဲ့ စီပိုးက အဓိက သွေးနဲ့ ကိုယ်တွင်းအရည်က ကူးတာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်သွေးနဲ့ ကိုယ်တွင်းအရည်...
သံစစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းကျေးဇူးကြောင့် အသည်းရောင်စီပိုး ပျောက်ကင်းခဲ့ရသူ ဒေါ်ဌေးယုမေ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၀ါးခယ်မမြို့နေ ဒေါ်ဌေးယုမေသည် အစိုးရအလုပ်တာဝန်အရ ရန်ကုန်သို့ပြောင်းလာခဲ့ပြီး အစိုးရအလုပ်မှ အနားယူချိန်တွင် ကုမ္ပဏီအလုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်သည်။ “လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်တုန်းက လက်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ဆေးစစ်လိုက်တော့ စီပိုးရှိမှန်းသိခဲ့တယ်။ လက်ခွဲစိတ်မှုကလည်း မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အာထရာဆောင်းရိုက်တော့လည်း အသည်းက ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲက ဆရာဝန်နဲ့ပြတော့ သူကအသည်းအားဆေးတစ်မျိုးစားဖို့...
မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားမျှသုံးရင် ဘီပိုး၊ စီပိုးကူးနိုင်လား
မေး ။ သူများ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားကိုယူပြီးရိတ်ရင် ဘီပိုး၊ စီပိုးကူးနိုင်ပါသလား ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်အခန်းဖော် သူငယ်ချင်းက ဘီပိုးရှိတယ်လို့ သိရလို့ပါ။ ကျွန်တော် သူ့မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားနဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဖူးပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ကိုပေါက်၊ လှည်းတန်း။ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွှန့် မှ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးသည်...